Isku soo duub fiidiyowga: maxaa loo sameeyaa iyo barnaamijyo si loo yareeyo cabirka | Abuurista khadka tooska ah
Marka wax la cadaadiyo, waxay u janjeeraa inay lumiso qaabkeeda waxayna u muuqataa tayo ka hooseysa sida qofku filayo. Marka ay timaado isku soo duubista fiidiyowga, tani sidoo kale badanaa way dhacdaa, waana in tayada luntay oo lagu doorto culeys yar. Laakiin ka waran haddii aan kuu sheegno inaad ku cadaadin karto fiidiyoow adigoon lumin tayada?
Haddii ay tahay inaad u soo dir fiidiyow aad u culus oo aad u baahan tahay inaad ku cadaadisid, laakiin ku hayso tayada sawirka, markaa taasi adiga ayaa ku xiiseynaya maxaa yeelay waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo kaa caawin doona inaad ilaaliso qiyamka muhiimka ah laakiin aad u miisaan yar tahay inaad dirto. Ma rabtaa inaad ogaato sida?
1 Muuji fiidiyow oo ha lumin tayada, suurtagal ma tahay?
2 Barnaamijyo lagu cadaadiyo video tayo leh
2.1 Ku cadaadi fiidiyoow: gacan-jabis
2.2 Movavi Video Beddelaha
2.3 Cadaadi video: VLC
2.4 Beddelaad HD Video Bilaash ah
3 Ma jiraan bogag mareeg ah oo fiidiyow loo beddelo?
Muuji fiidiyow oo ha lumin tayada, suurtagal ma tahay?
Xaqiiq ahaan, ma heli kartid wax walba. Taasi waa, ma cadaadin kartid fiidiyoow mana luminayo tayada. Laakiin waxa ku jira awooddaadu waa in, markaad dhimayso culeyska feylkaas, tayada la dhimay ay tahay mid aad u yar, habkaas oo ay ku sii socon doonto inay sarreyso, laakiin maaha sidii inay ahayd tii asalka ahayd.
Ogow taas, marka la dhimayo cabirka fiidiyowga, waxa ay qabato ayaa ah in laga saaro xogta fiidiyahaas, sida heerka xogta, bitrate-ka iyo waxaas oo dhan waxay noqon doonaan kuwo taban in fiidiyowga lagu arko tayada ugu fiican. Waa wax aan laga fursan karin.
Hadda, taasi micnaheedu maahan inaad yeelan doonto natiijo naxdin leh, in pixelated, joogsato, uma muuqato mid wanaagsan ... Waxaa jira barnaamijyo kaa caawin kara inaad ku cadaadisid fiidiyow adiga oo aan qasaarahaas la dareemin. Taasi way jirtaa, way jiri doontaa, laakiin waxay noqon kartaa wax yar oo laga dareemi karo kuwa kale.
Barnaamijyo lagu cadaadiyo video tayo leh
Kahor intaadan ka hadlin barnaamijyada kala duwan ee aad u adeegsan karto inaad ku cadaadin karto fiidiyowga, waa inaad maanka ku haysaa in, haddii aad isticmaasho boggaga internetka ee ay kaa codsadaan inaad soo geliso fiidiyowga, ma garanaysid hubaal waxa ay u socdaan ku samee iyada maxaa yeelay waxay ku martigelinayaan server-kooda adiguna ma xakamaynaysid isticmaalkooda. In kastoo sida caadiga ah aysan waxba dhicin, taasi micnaheedu maahan inaadan ilaalin abuurtaada sidaa darteed waxaan kugula talineynaa, markasta oo aad awoodid, inaad adeegsato barnaamijyada kombiyuutarkaaga (in kasta oo ay la macno tahay rakibiddooda iyo ku lumin meel bannaan)
Taasi waxay tiri, barnaamijyada aan kugula talineyno waa kuwa soo socda:
Ku cadaadi fiidiyoow: gacan-jabis
Gacan-jabis waa barnaamij caan ku ah tafatirka fiidiyowga. Waana sababta oo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku rakibto Windows, Linux iyo Mac, oo bixiya kala duwanaansho isticmaalkeeda.
Ku saabsan barnaamijka iyo waxa naga quseeya, waad awoodaa yaree culeyska fiidiyowyada adiga oo aan lumin tayada sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xakameyso xuduudaha fiidiyowga sida xallinta, heerka yara, ka saar raadadka maqalka, fiidiyoowga fiidiyowga ...
Oo ugu fiican oo dhan, waa lacag la'aan. Galitaanka degelkeeda waxaad ka heli kartaa soo degsashada iyada oo ku xidhan nidaamkaaga hawlgalka.
Movavi Video Beddelaha
Xaaladdan oo kale, tani waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada diinta video ugu caansan. Ka sokow u adeegida cadaadin, waxaad u isticmaali kartaa waxyaabo kale oo badan sida bedelida qaabka, la shaqeynta 4K, iwm.
Isaga kaliya hal dhibaato ayuu qabaa taasna waa ma aha 100% bilaash. Waxay leedahay nooc xadidan laakiin haddii aad rabto inaad yeelato dhammaan fursadaha markaad la shaqeyneyso waxaad u baahan doontaa nooca lacagta lagu bixiyo. Iyo wax kale, waxaa kaliya loo heli karaa Windows iyo Mac.
Cadaadi video: VLC
Xaqiiqdii barnaamijkani wax badan buu idinkaga dhawaaqayaa. VLC waa mid ka mid ah barnaamijyada lagu ciyaaro fiidiyowyada adduunka oo dhan laga yaqaan. Laakiin waxa aan dad badani ogayn ayaa ah inaad leedahay awood aad ku cadaadin karto fiidiyowga.
Si tan loo sameeyo, waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato oo kaliya waxa aad rabto inaad cadaadin laakiin sida loo sameeyo iyo waa maxay qaabka wax soo saarka ee aad ku siin karto.
Warka fiicani waa in, marka ay timaado isku soo duubista fiidiyowga, tayada lumintu ay ugu yar tahay barnaamijkan.
Beddelaad HD Video Bilaash ah
Haddii aad raadineyso qalab fudud oo lagu cadaadiyo fiidiyoow taasna madaxaaga aad uma kululeyso, markaa waxaad leedahay tan. Kaliya waxay ka timaaddaa Windows markii aad rakibto waad yareyn kartaa cabbirka fiidiyowyada aad rabto adigoon tayada ka lumin. Xaqiiqdii, waxay u shaqeysaa sida ugu macquulsan maxaa yeelay waxaad lahaan doontaa bar aad ku go'aansato inta aad rabto inaad hoos ugu dhigto tayada iyo inta aad riixeyso.
Runtu waxay tahay inaysan u fiicnayn wax badan oo kale, sidaa darteed waan cunaa Barnaamijka gaarka ah ee shaqadan waa mid aad u wanaagsan. Khasaaraha kaliya ee aan aragno waa in kaliya loogu talagalay hal nidaam hawlgal.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay kaliya Windows, laakiin waa wax caan ah. Waxaa loo isticmaali karaa Windows Vista, 7, 8, 8.1 iyo Windows 10. Maxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso? Waa hagaag, marka lagu daro isku-duubista fiidiyowga, waxay leedahay shaqooyin kale laakiin waa inaad maanka ku haysaa in nooca bilaashka ahi uu ku dari doono astaamaha muuqaalka fiidiyowga, sidaa darteed, haddii aadan rabin inay dhacdo, ama adigu iibso, ama waad tagtaa ikhtiyaar kale.
Marka ay timaado in la cadaadiyo barnaamijka, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku keydiso iyadoo ku saleysan tayada aad rabto, bedelida xuduudaha sida fiidiyowga iyo koodhadhka codka, heerka jir, heerka yara, iwm. Waxaad waayi doontaa tayada, laakiin waad xakameyn doontaa inta.
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah tifaftirayaasha fiidiyowga ugu fiican adduunka. Iyada oo aad awoodid jar, abuur, buur ... fiidiyow kasta, iyo mid ka mid ah shaqooyinkeeda sidoo kale waa in la cadaadiyo fiidiyowga. Tani waxay ku sameysaa iyada oo la yareeyo xallinta fiidiyowga, laakiin sidoo kale waad wax ka beddeli kartaa xuduudaha kale sida looxyada halkii labaad ama heerka tixraaca. Xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad jarto qaybo fiidiyowga ah oo aan shaqeynin.
Waxaad haysataa laba nooc, midka bilaashka ah, oo, sida Freemake, ku daraya astaamo-biyoodyo, ama nooca la bixiyay.
Ma jiraan bogag mareeg ah oo fiidiyow loo beddelo?
Hadda oo aan kaala hadalnay barnaamijyo, waxaad doorbidi kartaa wax ka dhakhso badan. Waxaa jira: iyada oo loo marayo bogagga shabakadda halka kaliya ee aad ku qasban tahay inaad soo dejiso fiidiyowyada oo aad qeexdo xuduudaha si aad daqiiqado gudahood kuugu haysato fiidiyowga cusub ee horeyba loo duubay oo ka miisaan yar.
Haddii aadan ka walwalsaneyn wixii aan kuu sheegnay ee ku saabsanaa inaad xakameyso fiidiyowgaas, waad leedahay sida xulasho bogaggan:
Hada adiga ayay kuu taalaa inaad go aansato waxaad rabto inaad ku cadaadin karto fiidiyaha, ha ahaato barnaamijyada kombiyuutarkaaga ama shabakadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Ku cadaadi fiidiyowga